ESI TINYE NTỌALA NKE ROUTER - NETWORK NA INTANETI - 2019
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịgbanwe ụfọdụ ntọala nke router, mgbe ahụ ọ ga-abụ na ị ga-eme nke a site na ntanetị ntanetị nke weebụ nke router. Ụfọdụ ndị ọrụ nwere ajụjụ banyere otu esi abanye ntọala nke router. Banyere nke a na okwu.
Esi esi tinye ntọala redire D-Link DIR
Akpa, banyere onye ntanetị ikuku wireless na mba anyị: D-Link DIR (DIR-300 NRU, DIR-615, DIR-320, na ndị ọzọ). Ụzọ ntinye iji tinye ntọala redirect D-Link:
Nchọgharị ihe nchọgharị
Tinye adreesị 192.168.0.1 na nbanye adreesị na pịa Tinye
Tinye aha njirimara na paswọọdụ ka ị gbanwee ntọala - site na ndabara, ndị na-ahụ maka D-Link na-eji aha njirimara na paswọọdụ ha na nke ha, n'otu n'otu. Ọ bụrụ na ị gbanweela paswọọdụ ahụ, ịkwesịrị ịbanye n'onwe gị. N'okwu a, buru n'uche na nke a abughi paswọọdụ (ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ otu) ahụ ejiri jikọọ na rawụta site na Wi-Fi.
Ọ bụrụ na ị chetaghị paswọọdụ: ị nwere ike ịtọgharịa ntọala nke router na ndabara ndabara, mgbe ahụ, ọ ga-adị na 192.168.0.1, nbanye na paswọọdụ ga-abụkwa ọkọlọtọ.
Ọ bụrụ na ọ dịghị ihe meghere na 192.168.0.1 - gaa n'akụkụ nke atọ nke isiokwu a, ọ na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ihe ị ga-eme na nke a.
Na nke a na ngwa redirect D-Link. Ọ bụrụ na isi ihe ndị a adịghị enyere gị aka, ma ọ bụ ihe nchọgharị anaghị abanye na ntọala nke router, gaa n'akụkụ nke atọ nke isiokwu ahụ.
Ụzọ esi tinye Asus router ntọala
Ka ị wee banye na nhazi ntọala nke onye na-ahụ maka wireless wired Asus (RT-G32, RT-N10, RT-N12, wdg), ịkwesịrị igosi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe ahụ dị na mbụ:
Wụgharịa ihe nchọgharị ọ bụla ma gaa na 192.168.1.1
Tinye nbanye na paswọọdụ ịbanye na ntọala nke rawụta Asus: ndị ọkọlọtọ bụ ha na admin ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị gbanwere ha, nke gị. Ọ bụrụ na ị chetaghị data nbanye, ịnwere ike ịtọgharịa redire na ntọala ntọala.
Ọ bụrụ na ihe nchọgharị ahụ emegheghị na peeji nke 192.168.1.1, gbalịa ụzọ ndị a kọwara na nduzi mpaghara nke ọzọ.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọ banyeghị na ntọala nke router
Ọ bụrụ na ịchọta ihuenyo ma ọ bụ njehie mgbe ị na-agbalị ịnweta 192.168.0.1 ma ọ bụ 192.168.1.1, gbalịa ihe ndị a:
Gbaa ọsọ ọsọ (maka nke a, dịka ọmụmaatụ, pịa igodo Win + R ma tinye iwu ahụ cmd)
Tinye iwu ipconfig na akara iwu
N'ihi iwu ahụ, ị ​​ga-ahụ ntinye igwe na ntanetị na kọmpụta gị.
Lezienụ anya na njikọ ejiri jikọọ na rawụta - ọ bụrụ na ị jikọọ na router site na waya, mgbe ahụ, Ethernet, ma ọ bụrụ na enweghi wires - mgbe ahụ njikọ ekwentị.
Lelee uru nke "Ogwe ụzọ Nhọrọ".
Kama adreesị 192.168.0.1, jiri uru ị hụrụ na mpaghara a iji banye ntọala nke router.
N'otu aka ahụ, mgbe ị mụtara "Ọnụ Ụzọ Nhọrọ", mmadụ nwekwara ike ịbanye na ntọala ndị ọzọ na-eme njem, usoro ya n'onwe ya bụ otu ebe.
Ọ bụrụ na ị maghị ma ọ bụ chefuola paswọọdụ iji nweta nkwụnye ihe Wi-Fi, mgbe ahụ ị ga-enwerịrị ịtọgharịa ya na ntọala ntọala site na iji bọtịnụ "Tọgharia" nke fọrọ nke nta ka onye ọ bụla rawụta wijetị nwere, wee mezigharị ihe nrụnye ahụ. Dịka iwu, ọ gaghị esiri ike: ị nwere ike iji ntụziaka dị ukwuu na saịtị a.